Yakachipa Sheet simbi zvikamu zvemoto fekitori uye vanotengesa | Ouzhan
Zvakanakira jira simbi Welding zvikamu
- Sevha zvinhu zvesimbi uye udzikise uremu hwesimba;
- Ita kuti nzira dzekugadzirisa nekugadzirisa dzive nyore uye nekuvandudza kushanda kwekugadzira;
- Yakasimba dhizaini kusimbisa uye kubatana kwakanaka; kupa kwakakura kuchinjika kwechimiro dhizaini;
- Iyo yekutenderera iri nyore kugadzirisa uye kugadzirisa michina.
Ouzhan OEM yakagadzirirwa jira simbi yekutengesa sevhisi-China Shanghai sheet simbi yekutengesa zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Tinogona kugadzira yakakwira-yakajeka pepa simbi yekumonera zvikamu neyakagadzikana uye yakavimbika mhando zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakakwana kwesheet simbi yekutengesa michina zvikamu. Uye zvakare, iyo jira simbi yekutengesa zvigadzirwa zvinopihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye zvinogona kushandiswa mune dzakasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidza mutengo masevhisi eshiti simbi yekumonera uye zvigadzirwa zvemoto kune edu akakosha vatengi.
Application nzvimbo jira simbi nomoto
Nzira dzakasiyana-siyana dzekutengesa dzakakodzera zvinhu zvakasiyana:
Gesi Welding: yakaderera kabhoni simbi, yakaoma chiwanikwa mhangura, nezvimwewo.
Electrode arc Welding: isina kupisa simbi, tsvuku tsvuku, yakaoma chiwanikwa, nezvimwe.
Kunyudzwa arc kutenderera:
Carbon dioxide gasi inodzivirirwa kutenderera: yakatetepa ndiro yekutenderera
Argon arc welding: titanium chiwanikwa, Al chiwanikwa, nezvimwe.
Plasma Welding: air duct, capacitor bhokisi, nezvimwe.
Electroslag Welding: hombe cast-welded gobvu-rakakomberedzwa kumanikidza ngarava, nezvimwe.
Spot Welding: kuwanda kwepepa yekutsika zvikamu uye muchinjiko mabara, nezvimwe.
Seam Welding: dzakaonda simbi zvikamu
Projection nomoto: T-zvakaumbwa nomoto, mutopota kuyambuka, etc.
Garo Welding: njanji, etc.
Kukakavara Welding: rotors, maoko, etc.
Brazing: simbi-inomhanya simbi, zvikamu zveinjini, nezvimwe.
Ndezvipi zvinoshandiswa zve sheet sheet simbi yekutengesa zvikamu
Chinangwa chikuru chekusungisa ndechekubatanidza zvidiki zvesimbi kuita zvihombe (zvinoenderana nemadhirowa kana saizi inodiwa), kana kugadzira geometry inodiwa kuburikidza nekubatana (welding). Welding, inozivikanwawo seyekushuchisa kana kutetepa, inzira yekugadzira uye tekinoroji yekubatanidza simbi kana zvimwe zvinhu zvine thermoplastic senge mapurasitiki nekudziya, kupisa kwakanyanya kana kumanikidza kwakanyanya.
Zvakanakira Ouzhan jira simbi Welding sevhisi
- Yese chaiyo machira esimbi yekutenderera inoenderana neyakaomarara mhando yekutarisa.
- Sekureva kwemadhirowa kana sampuli yeyakajeka simbi yekumonera kugadzira.
Pashure: Tsika jira simbi yekutsika zvikamu
Zvadaro: Yakasarudzika jira simbi yekutengesa zvikamu